🥇5 Abarhwebi abakwi-Intanethi abakwi-Intanethi kwi-ETF yoTyalo-mali ngoJanuwari 2022: Funda isiKhokelo sethu sokuGqibela!
Abarhwebi be-ETF -Ungazifumana njani iiNtengiso ze-ETF ezilungileyo kwi2021?
Abarhwebi be-ETF- okanye ngokulula 'ii-ETFs' (iiFunds eziThengisiweyo eziThengisiweyo), zikuvumela ukuba utyale imali kwiasethi, okanye kwiqela leeasethi, ngaphandle kokuthatha ubunini. Isibonelelo esikhulu sokwenza oku kukufumana ukubhengezwa kwiimarike ekunokuthi kube nzima ukufikelela kuzo njengomrhwebi othengisayo.
Cinga ngemigca yeebhondi zikarhulumente wamanye amazwe, izindlu nomhlaba, okanye intsangu esemthethweni. Ii-ETFs ziluncedo nakwiinjongo ezahlukeneyo, njengoko zikuvumela ukuba utyalomali kwiiasethi ezininzi ngorhwebo olunye.
Ukuze ufikelele kule ndawo yeebhiliyoni ezili-bhiliyoni, kuya kufuneka ufumane umthengisi we-ETF othembekileyo. Ngamakhulu amaqonga asebenzayo kwimarike, kuya kufuneka uphinde uqwalasele iimetrikhi ezinje ngommiselo, iifizi, iikhomishini, kunye neendlela zokuhlawula.
Kweli nqaku, siphonononga abarhwebi ababalaseleyo be-ETF kwisithuba se-Intanethi. Sikwacacisa ii-ins kunye nokuphuma kwendlela esebenza ngayo i-ETFs, kunye nendlela yokwenza utyalomali namhlanje.
Qaphela: Ukuba awunawo amava akho otyalo mali kwii-ETFs, kunokuba kufanelekile ukukhetha ingxowa mali. Oku kuyakuvumela ukuba uzuze kwisithuba se-ETF ngaphandle kokufuna ukuba naluphi na ulwazi kwiimarike zezemali.
Ngokucacileyo, ii-ETFs zikuvumela ukuba utyale imali kwizixhobo zemali ngaphandle kokuba ungumnini okanye ugcine iasethi okanye iqela leeasethi. Umbono ophambili we-ETFs kukuba balandelela amaxabiso ehlabathi okwenyani yeeasethi kwaye ngenxa yoko-benza ukuba kube lula kakhulu ukufumana ukubonwa kwindawo ethile yentengiso. Ngapha koko, ii-ETFs zinamandla okulandela umkhondo phantse nayiphi na iklasi yeeasethi, okoko nje indawo yentengiso ikhona.
Umzekelo, masiqwalasele i-S & P 500. Kwabo bangaziyo, le yinkcazo yemarike yesitokhwe elandelela ezona nkampani zinkulu zidweliswe esidlangalaleni e-US. Ngokuqhelekileyo, ukuba ufuna ukufumana ukubhengezwa kwiimarike ezibanzi zaseMelika, kuya kufuneka uthenge izabelo ezingama-500. Ayisiyi kuba kukuchitha nje ixesha elininzi, kodwa uya kuhlawula imali exabisekileyo kwiikhomishini zomthengisi.
Endaweni yokuba utyale imali kunye nomthengisi we-ETF olandela iinkampani ezingama-500 ezimele i-S & P 500, kuya kufuneka ubeke urhwebo olunye. Yiloo odolo enye, kwaye okona kubaluleke kakhulu - intlawulo enye yekhomishini. Njengokuba kunye nexabiso lokwenyani lehlabathi lenkampani nganye litshintsha, ixabiso lotyalo-mali lwakho lwe-ETF luya kuhlaziywa ngokufanelekileyo.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ii-ETF azigcinwanga kuphela kwiimarike zesitokhwe zemveli. Ngokuphambene noko, kukho amashumi amawaka e-ETF okwangoku kwiimarike ezilandelela zonke iintlobo zeempahla. Oku kubandakanya izinto ezinje igolide, isilivere, intsangu esemthethweni, ioyile, nengqolowa, izindlu nomhlaba zangaphandle, kunye namacandelo athile afana nokwenza, ukuhamba komoya, kunye nezemali.
Iinkonzo kunye neengozi ze-ETFs
Fikelela kumawakawaka eemarike ngokucofa iqhosha
Gcina imali kwiqela leasethi ngentengiso enye
Landa phantse naliphi na udidi lweeasethi ezinentengiso
Ukufumana ukubhengezwa kwiimarike ekunokubanzima ukufikelela kuzo
Imirhumo iphantsi kakhulu
Amandla okunciphisa i-asethi ngokulula
Amakhulu ama-ETF abarhwebi abanokukhetha kuwo
Awunayo iasethi esezantsi
Kuya kufuneka ukhethe olwakho utyalo-mali
Zithini ii-ETF Brokers?
Ukuba uyasithanda isandi se-ETFs, kuyakufuneka ufumane umthengisi we-ETF. Kwiimeko ezininzi, aba bathengisi bemveli abakwi-Intanethi ababonelela ngobutyebi beeklasi zeasethi- ezinje ngeesitokhwe, iibhondi, iimali ezihlanganyelanayo, kunye nee-ETFs. Kananjalo, inkqubo yotyalo mali isebenza ngokufanayo nakweyiphi na enye inkampani yokurhweba.
Umzekelo, kuyakufuneka ufumane umthengisi ohlangabezana neemfuno zakho kwaye emva koko uvule iakhawunti. Emva kokuqinisekisa isazisi sakho, kuyakufuneka ukuba ufake imali. Nje ukuba iakhawunti yakho icwangcisiwe, kuyakufuneka ukhethe i-ETF oza kutyala kuyo. Ngokubalulekileyo, ngaphandle kokuba ubeke imali kwi-mutual fund, kuyakufuneka utyale imali nge-DIY.
Zisebenza njani ii-ETFs?
Abarhwebi be-ETF benza ukuba inkqubo yotyalo-mali ibe lula kakhulu. Ngale nto ithethwayo, ukuba awuzange utyale imali kwi-ETF, kubalulekile ukuba wenze uphando ngaphambi kokuba uhlukane nemali yakho.
Jonga iziseko ezingezantsi.
Ii-ETFs zePhysical vs CFDs
Ukuba utyalomali kwi-ETF yomzimba, oku kuthetha ukuba umrhwebi uza kutyala imali kwi-asethi. Umzekelo, masithi utyalomali kwi-ETF elandelela i-Dow Jones Index. Ngokwenza njalo, umthengisi we-ETF uza kuthenga isitokhwe kwiinkampani ezingama-30 ezimele iDow.
Ngapha koko, umthengisi we-ETF uya kulinganisa izinto abazithengileyo ukuze zibonise isalathiso esifana nokuthanda. Umzekelo, ukuba iWalt Disney yenza iipesenti ezintlanu zeDow Jones ngokwemilinganiselo yokulinganisa, ipotifoliyo yomthengisi we-ETF iya kuba neepesenti ezi-5 zezabelo zeWalt Disney
Ngenye indlela, unokuthatha isigqibo sokutyala imali kumthengisi weCFD ekunika ukufikelela kwii-ETFs. Ngokwenza njalo, umthengisi weCFD uya kuthi Ukulandelela Ixabiso lehlabathi lokwenyani lemarike ye-ETF, kodwa ungathengi iiasethi ezingaphantsi.
Ukusuka kumtyali mali, ii-CFD zisebenza kakhulu ngendlela efanayo notyalo-mali kunye nomnikezeli we-ETF ebonakalayo, nangona kunjalo, uya kuhlala ufumanisa ukuba iifizi kunye neekhomishini ziphantsi kakhulu.
Isibonelelo esongezelelweyo sokutyalomali kwii-ETFs kukuba uya kuba nokukhetha ukuhamba ixesha elide okanye elifutshane kwindawo yentengiso oyikhethileyo. Kulabo abangaziyo, ukuhamba ixesha elide kuthetha ukuba utyala imali kwiasethi inyuka ngexabiso.
Kwimeko yokunqongophala, ucinga ukuba ixabiso le-ETF liza kuhla. Ngelixa bonke abathengisi be-ETF bakuvumela ukuba uhambe ixesha elide kwimarike, kuya kufuneka usebenzise umthengisi weCFD ukuba unqwenela ukufutshane.
Ukuba ufuna ukuhamba ixesha elide kwi-ETF, kuyakufuneka ubeke i-oda 'yokuthenga'
Ukuba ufuna ukuthengisa kancinci i-ETF, kuyakufuneka ubeke i-oda 'yokuthengisa'.
Xa kuziwa ekukhetheni i-ETF yokutyala imali kuyo, uya kuba namashumi amawaka eemarike onokukhetha kuzo. Ngale nto ithethwayo, kukho iiasethi zokuma ezithi zilandelwe zii-ETFs kwaye ke- uninzi lwabathengi be-ETF baya kukunika ukufikelela kuzo.
Sibhale uluhlu lweemarike ze-ETF eziqhelekileyo.
Iimakethe zeStock: Njengoko kuphawuliwe ngasentla, ii-ETFs zikuvumela ukuba utyalomali kwiimarike ezibanzi zesitokhwe. Umzekelo, ukuba ufuna ukufumana uqoqosho lwase-US, ungatyala imali kwi-ETF elandelela i-S & P 500 okanye iDow Jones. Ukuba ufuna ukunamathela kwiimarike zase-UK, unokutyala imali kwi-FTSE 100.
Bond: Ii-ETFs ziyindlela elungileyo yokufumana ukufikelela kwiimarike zebhondi ebekuya kuba nzima ukufikelela kuzo. Ngaphambili koku kukho iibhondi zikarhulumente wamanye amazwe ezithengisa kuphela kubuncinane beesayizi zamanani ama-6 okanye ama-7.
Izindlu ezithengiswayo: Abanye abathengisi be-ETF baya kubonelela Iitrasti zeNtengiso yeNdawo (REITs) ezifuna ukulandelela intengiso ethile yepropathi. Oku kukuvumela ukuba utyale imali kwiarhente yokuthenga izindlu nomhlaba ngaphandle kokuthenga indlu ngokuthe ngqo- ngaphakathi nangaphandle.
Intsangu esemthethweni: Indawo yentsangu esemthethweni sele ilishishini leebhiliyoni ezininzi. Kananjalo, yayingumcimbi wexesha ngaphambi kokuba intsangu ye-ETF izalisekise. Ngapha koko, zikhona ii-ETFs ezimbalwa onokukhetha kuzo, uninzi lwazo zilandelela abalimi bentsangu kunye nabathengisi.
Umgangatho wenzala: Unokutshala imali kwi-ETF elandelela amaxabiso enzala. Le yeyona ndlela ilungileyo yokubopha utyalomali lwakho kwimali ethile.
Iimveliso: Ukuba ufuna ukufumana ukubonwa kwezinto ezifana negolide, ioyile, irhasi yendalo, okanye ingqolowa, ii-ETF zikuvumela ukuba wenze oku ngokulula. Kwakhona, akukho mfuneko yokuba ngumnini okanye igcinwe isiseko seasethi, ukuze ke usenokunciphisa imveliso.
Olu luhlu lungentla aluphelelanga. Ngapha koko, zininzi ezinye iimarike abathengisi be-ETF abakuvumela ukuba uzilandele.
Ndiyenza njani imali xa ndityala imali kwi-ETFs?
Kwiimeko ezininzi, uya kwenza imali kutyalo-mali lwe-ETF ngokuzuza kwemali. Njengoko siza kugubungela kungekudala, ezinye ii-ETFs zikuvumela ukuba ufumane isabelo sakho sentlawulo zesahlulo ukuba silanda izitokhwe zehlabathi lokwenyani.
Nangona kunjalo, makhe sijonge imizekelo embalwa yendlela onokuyenza ngayo imali xa uhamba ixesha elide kwaye lifutshane kwi-ETF.
🥇 Ukuhamba ixesha elide kwi-FTSE 100 ETF
Masithi ufuna ukutyala imali kwiinkampani ezili-100 ezenza i-FTSE 100. Uziva uqinisekile malunga noqoqosho lwase-UK, ke ugqibe ekubeni uhambe ixesha elide.
I-FTSE 100 okwangoku inexabiso kuma-3,000 amanqaku
Utyala imali eyi- £ 1,000 kwi-ETF ngomrhwebi okwi-intanethi
Kananjalo, ubeka iodolo 'yokuthenga'
Kwiinyanga ezimbalwa kamva, i-FTSE 100 ngoku inexabiso kuma-3,600 amanqaku
Oku kufikelela kunyuso lwe-20%
Ukhupha imali yakho kutyalo-mali kunye nomthengisi okhethiweyo kwi-Intanethi
Njengokuba ukhuphe i- £ 1,200, wenze i- $ 200 kwinzuzo
Ukuhamba ngokufutshane kwi-ETF kaRhulumente waseTurkey
Ucinga ukuba uqoqosho lwaseTurkey lubekelwe ixesha lokucinga kwezi nyanga zizayo. Kananjalo, uthatha isigqibo sokufumana ukubhengezwa kwintengiso ngokutyala imali kwi-ETF elandelela isivuno kwizibophelelo zikarhulumente waseTurkey.
Unyaka we-10 iibhondi zikarhulumente waseTurkey ngoku zinesivuno se-7%
Njengoko ubambekile kuqoqosho lwaseTurkey, ubeka iodolo 'yokuthengisa'
Kwiinyanga ezimbalwa kamva, ibhanki ephambili yaseTurkey ibhengeza ukuba inciphisa inzala ukunceda ukukhulisa uqoqosho
Oku kuthetha ukuba iibhondi zeminyaka eli-10 ziyehla ngexabiso, ke isivuno sinyuka siye kwi-9%
Njengokuba ufinyeze imakethi, ngoku unenzuzo ngaphezulu nje kwe-28% (isivuno sikhula ukusuka kwi-7% ukuya kwi-9%)
Uthatha isigqibo sokukhupha imali yakho ngokuzuzayo, ke ngoko ubeka iodolo 'yokuthenga'
Kwinzuzo ye-28% kwisibonda se- £ 1,000, wenze i- £ 280 kwinzuzo
Ngaba ii-ETFs zihlawula izabelo?
Ngamanye amaxesha, ii-ETFs zikuvumela ukuba ufumane isabelo sakho sentlawulo zesahlulo, ukuba kufanelekile. Umzekelo, masithi i-ETF ilanda i-FTSE 100. Ukuba i-85 yezo nkampani ihlawula izabelo zekota, uyakufumana isabelo sakho-ngokulingana nemali oyityalileyo.
Nangona kunjalo, uya kulungela ezi zahlulo kuphela ukuba umboneleli we-ETF ubambe izabelo ezisisiseko kwipotifoliyo yakhe. Ayizukuba njalo ukuba usebenzisa i-CFD broker ukutyala imali kwi-FTSE 100 ETF, kwaye umrhwebi ulandela nje ixabiso le-ETF.
Qaphela: Ukuba unelungelo lokufumana izabelo, umboneleli we-ETF uya kuhlawulwa ngekota. Kungenxa yokuba baya kufumana iintlawulo zesahlulo mihla le, njengoko iinkampani zihlawula ngemihla eyahlukeneyo.
Ngaba i-ETF yomthengisi
Ke ngoku ukuba uyazi ukuba zisebenza njani ii-ETFs, ngoku kufuneka ucinge ngomnikezeli onqwenela ukumsebenzisa. Ngale ndlela, uneendlela ezintathu onokukhetha kuzo:
Yiya ngqo kwiziko lezemali eliphethe i-ETF (umzekelo uVanguard)
Sebenzisa i-broker ekwi-Intanethi ekunika ukufikelela kwi-ETFs
Sebenzisa umthengisi weCFD
Ngale nto ithethwayo, kukho iimfumba zezinye iimethrikhi ekufuneka uziqwalasele ngaphambi kokujoyina umthengisi omtsha we-ETF. Kananjalo, qiniseka ukuba ufunde ezi ngcebiso zilandelayo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, olona qeqesho lubaluleke kakhulu ekufuneka ulwenzile malunga nommiselo. Ngokubalulekileyo, kuya kufuneka usebenzise kuphela umrhwebi ophethe ubuncinci ilayisensi enye kumlawuli omnye.
Oku kuya kubandakanya ukuthanda kwe-UK FCA, ASIC (Ostreliya), MAS (eSingapore), okanye kwiCySEC (eSipro). Ukuba umrhwebi akalawulwa, okanye ubambe kuphela iphepha-mvume kulawulo olungelulo olwe-tier-one (njengeBritish Virgin Islands), kuya kufuneka uyithintele kuzo zonke iindleko.
Kuya kufuneka uchithe ixesha elithile ujonga isebe le-ETF lomthengisi. Emva kwayo yonke loo nto, kufuneka uqinisekise ukuba umrhwebi uyayixhasa i-ETF ethile onqwenela ukuyityala kuyo. Umzekelo, ukuba ujonge ukutyala imali kwimarike yemasheya ye-ETF, singalindela ukubona i-FTSE 100, NASDAQ 100, Dow Jones, kunye nokunye.
Kuya kufuneka uphinde uvavanye ukuba uyafuna na ukhetho lokuhamba ngokufutshane ukuze usebenzise ubungakanani. Ukuba ucwangcisa ukwenza enye yezi, kuya kufuneka ukhethe umthengisi weCFD oxhasa izixhobo ze-ETFs.
Iidiphozithi kunye nokurhoxiswa kwemali
Ukuba ujonge ukutyala imali nge-ETF, uya kuba semngciphekweni wemali yakho. Kananjalo, kuya kufuneka ujonge ukuba zeziphi iindlela zokuhlawula ezixhaswayo. Uninzi lwabarhwebi be-ETF likuvumela ukuba ubeke imali ngedebhithi okanye kwikhadi letyala, kunye nocingo lwebhanki.
Abanye abathengisi be-ETF baququzelela iintlawulo ze-e-wallet. Ukuba bayakwenza, oku kuyakuquka ukuthanda iPaypal, iSkrill kunye neNeteller. Ngaphezulu kweendlela ezithile zokuhlawula ezixhaswayo, kuya kufuneka ujonge ubuncinci bezixa zedipozithi.
Ngapha koko, jonga ukuba umthengisi we-ETF uhlawulisa nayiphi na idipozithi okanye umrhumo wokurhoxa-ngakumbi ukuba ucwangcisa ukusebenzisa ikhadi lekhredithi.
Abanye abathengisi be-ETF bathintelwe kumazwe abanokuthi basebenze kuwo. Umzekelo, ukuba uhlala e-UK, umrhwebi kuya kufuneka abambe ilayisensi kunye ne-FCA- okanye umlawuli osekwe eYurophu njengeCySEC.
Abarhwebi be-ETF baya kuhlala behlawulisa umrhumo. Phambili koku yimali yesondlo yonyaka. Njengoko igama libonisa, kuya kufuneka uhlawule umrhumo kutyalomali lwakho lwe-ETF ngalo lonke ixesha luhlala luvulekile. Umzekelo, masithi utyale imali eyi- $ 5,000 kwi-REIT ETF, kwaye umrhwebi uhlawula umrhumo wonyaka we-1.5%.
Oku kuthetha ukuba uza kuhlawula i- £ 75 ngonyaka kutyalo-mali lwakho lwe-ETF. Ngamanye amagama, kuya kufuneka wenze ubuncinci iipesenti ezi-1.5 kwinzuzo ukuze nje uphule. Kananjalo, bambelela kubarhwebi be-ETF ababonelela ngeefizi zokugcina eziphantsi kakhulu.
Ukuba usahlala kwi-newbie kwihlabathi le-ETFs, uya kufuna ukukhetha umthengisi onikezela iimfumba zezixhobo zemfundo. Ayisiyi kuba nje kuphela oku kubandakanya ukucacisa ividiyo kunye nezikhokelo zenyathelo ngenyathelo, kodwa kunye nohlalutyo lweendaba zexesha lokwenyani.
Emva kwayo yonke loo nto, uyacelwa ukuba ukhethe utyalomali lwakho kwisiseko se-DIY, ke uyakufuna lonke uncedo onokulufumana.
Nangona i-ETF brokers ayinakukunika iingcebiso malunga noluphi utyalomali omele ukulwenza, banokukunceda xa kuziwa ekumiseni urhwebo. Kananjalo, kuya kufuneka ukhethe umrhwebi onikezela ngenkonzo yabathengi ephezulu.
Oku kufanele kubandakanya ukhetho lwengxoxo ebukhoma, i-imeyile, kunye nenkxaso yefowuni- ngakumbi iiyure ezingama-24 ngosuku.
Ungathenga okanye uthengise izabelo Investment kwi-Intanethi kwi-Intanethi.
Ke ngoku ukuba uyazi ukuba kuya kufuneka ujonge ntoni xa ukhetha umthengisi we-ETF, ngoku siza kukubonisa ukuba ungaqala njani. Landela nje isikhokelo ngamanyathelo achazwe apha ngezantsi ukuze ufumane uhambo lwakho lotyalo-mali lwe-ETF.
Inyathelo 1: Khetha i-ETF Broker
Isango lakho lokuqala lokufowuna iya kuba kukukhetha umthengisi we-ETF ohlangabezana neemfuno zakho. Ukuba ujonga ukuphanda umrhwebi ngokwakho, jonga nje iingcebiso ezichazwe kwicandelo elingentla. Ngokubalulekileyo, kuya kufuneka uvavanye ukuba uyafuna ukukhetha umthengisi weCFD (ukuba uyathengisa ngokufutshane kwaye usebenzise amandla) okanye umthengisi we-ETF wemveli (ukuba ujonge ukufumana izabelo).
Ukuba awunalo ixesha lokuphanda iqonga ngokwakho, singacebisa ukuba uphonononge ii-broker ezintlanu ze-ETF ezidweliswe apha ngezantsi kweli phepha. Zonke izinto esizikhethileyo zihlangabezana neemfuno zethu ezingqongqo-ngakumbi ezo zingqonge umgaqo, imirhumo ephantsi kunye neendlela zokuhlawula.
Ngoku kuya kufuneka uvule iakhawunti kunye nomthengisi okhethiweyo we-ETF. Oku kukuqinisekisa ukuba iqonga lihlala lihambelana nomzimba walo onemvume, kunye nemithetho ephathelene nokuchithwa kwemali.
Kananjalo, kuya kufuneka ubonelele ngolu lwazi lulandelayo:
Inombolo ye-Inshurensi kaZwelonke (okanye iNombolo yeSazisi yeRhafu)
Umrhwebi uya kuzama ukuqinisekisa ulwazi lwakho ngombane. Ukuba ayikwazi ukwenza njalo, uya kucelwa ukuba ulayishe ikopi yepasipoti yakho okanye ilayisenisi yokuqhuba.
Nje ukuba iakhawunti yakho ye-ETF yomrhwebi isetelwe, uya kuthi emva koko ucelwe ukuba ufake imali. Iindlela ezithile zokuhlawula ezikhoyo kuwe ziya kwahluka kubroker-to-broker.
Ngale nto ithethwayo, uninzi lukuvumela ukuba udipozise ngokutshintshwa kwebhanki okanye ikhadi lebhanki / lekhadi letyala. Ukuba ujonge ukusebenzisa i-e-wallet njengePaypal, kuya kufuneka usebenzise umthengisi weCFD.
Inyathelo 4: Khangela i-ETF yakho ekhethiweyo
Kunqabile ukuba ufumane umrhwebi ogxile kuphela kwii-ETFs, ke iqonga olisebenzisayo lifana nokunikezela ngoluhlu lweeklasi zeasethi, nazo. Kananjalo, kuya kufuneka ubhekise phambili kwicandelo le-ETF lesiza.
Uya kuthi emva koko ubone uluhlu olupheleleyo lwee-ETFs onokuthi utyale imali kuzo. Abanye abathengisi bayakuvumela ukuba ucofe iziphumo ngentengiso- ezinje ngeebond, izinto ezithengiswayo, izindlu nomhlaba, okanye isitokhwe. Ukuba unayo i-ETF ethile engqondweni, unokuyikhangela.
Inyathelo 5: Yenza utyalomali
Nje ukuba wenze njalo ikhona I-ETF onqwenela ukuyityala, uya kuthi emva koko uthathe isigqibo sokuba uyafuna ukuhamba ixesha elide (uthenga i-odolo) okanye umfutshane (thengisa iodolo). Ungalibali, unokuhamba kancinci ukuba usebenzisa i-CFD broker.
Emva koko, kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba ufuna ukutyala imali engakanani. Faka oku kwibhokisi efanelekileyo, kunye nexabiso lakho lokungena olithandayo. Ukuba uyonwabile ukuthatha eli xabiso lilandelayo likho, khetha iodolo yentengiso.
Ukuba utyalomali kwi-ETF ngemveliso yeCFD, kulapho uzakufumana khona isicelo sokuphakamisa. Imali onokuyisebenzisa iya kugqitywa ngumrhwebi, i-asethi oyithengisayo kunye nendawo okuyo.
Okokugqibela, beka ukuthenga / ukuthengisa ukuze ugqibezele utyalo-mali lwakho lwe-ETF.
Inyathelo 6: Ukukhupha imali yakho kwi-ETF
Utyalomali lwe-ETF luhlala ludlala okoko unqwenela. Oku kunjalo nakwimeko yokuba ukutyala imali kwiiklasi zeeasethi ezinesiphelo njengeebhondi. Kananjalo, ixabiso lotyalo-mali lwakho lwe-ETF luya kunyuka luye ezantsi ngokweeasethi ezilandelelweyo. Uya kuba nenketho yokufumana imali yakho kutyalo-mali nangaliphi na ixesha - ngethemba lokufumana inzuzo.
Xa uyikhupha, imali iya kufakwa kwangoko kwi-akhawunti yakho ye-ETF yomrhwebi. Ungatyala imali kwezinye iiasethi okanye ucele nje ukurhoxa kwi-akhawunti yakho yebhanki.
Abarhwebi abahlanu abaphambili be-ETF: Abona bakhethi bethu baBalaseleyo ku-5
Ngamakhulu ama-ETF abarhwebi abanokukhetha kuwo, kunokuba yinkqubo echitha ixesha ukufumana iqonga elihlangabezana neemfuno zakho zexesha elide. Ngokubalulekileyo, ukuba ujonge umrhwebi olawulwayo onikezela iimfumba zeemarike ze-ETF, iifizi eziphantsi, ukusasazeka okukhuphisanayo, kunye neendlela ezininzi zokuhlawula mihla le-singacebisa ukuba siphonononge aba bathengisi bahlanu balandelayo.
I-Capital.com yi-FCA, i-CySEC, i-ASIC, kunye ne-NBRB elawulwa yi-intanethi ye-intanethi enikezela ngeemfumba zezixhobo zemali. Yonke ikwimo yee-CFDs - oku kubandakanya isitokhwe, i-indices kunye nempahla yorhwebo. Awuyi kuhlawula nepeni enye kwikhomishini, kwaye ukusasazeka kuqine kakhulu. Amaziko okuphucula nawo ayanikezelwa - ahambelana ngokupheleleyo nemida ye-ESMA.
Isishwankathelo, kuya kufuneka ube nembono elungileyo yendlela ii-ETFs ezisebenza ngayo. Oku kubandakanya ukwenziwa kwe-ETFs, iimarike ezininzi onokutyala kuzo, kunye neendlela ezifunekayo zokuthengisa ngokufutshane. Eyona nto ibalulekileyo yokuthabatha kukuba ukhetha umthengisi we-ETF ohlangabezana ngokufanelekileyo neemfuno zakho zokurhweba zexesha elide.
Okona kuncinci, oku kufanele ukuba kube ngumrhwebi onokuma okuqinileyo kolawulo, imirhumo yokhuphiswano kunye nenkxaso yemfumba yeendlela zokuhlawula. Ukuba awunalo ixesha lokuphanda iqonga ngokwakho, sikwadwelise ii-brokers zethu ezintlanu ezicetyiswayo ze-2021-nganye nganye ihlangabezana neenqobo zethu ezingqongqo.
Yintoni umthengisi we-ETF?
Abarhwebi be-ETF bayakuvumela ukuba utyale imali kuluhlu lweentengiso ze-ETF. Ngelixa abanye beququzelela ii-ETFs zomzimba, ezinye zijolise kwiiCFD.
Yiyiphi idiphozithi encinci eyenziwa ngabaxhasi be-ETF?
Oku kuyahluka ngokungafaniyo kwiqonga. Ngelixa ezinye zingenazo izixa zedipozithi ubuncinci kuzo zonke, ezinye ziya kufuna i- $ 100 okanye nangaphezulu.
Oku kuxhomekeke. Ukuba umboneleli we-ETF uthenge izabelo zesalathiso asilandeleyo, uya kuba nelungelo kwisabelo sakho sentlawulo yokwahlulahlula. Oku ngekhe kube njalo ukuba utyala imali kwi-ETF nge-CFD.
Ngaba i-ETF brokers ilawulwa?
Ewe bonke abarhwebi base-ETF base-UK kufuneka babambe iphepha-mvume kwiGunya lokuZiphatha kwezeMali (i-FCA). Eminye imizimba ephawuleka yokufumana iilayisensi ibandakanya i-ASIC (Australia) kunye neCySEC (eCyprus).
Ngaba ungayifutshane i-ETF?
Ngokungafaniyo neengxowa-mali ezihlangeneyo, ii-ETFs zikuvumela ukuba uthengise kancinci kwimarike. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ukuba utyalomali kwi-ETF ngeCFD.
Ngaba ii-ETFs zenyama zenza njani imali?
I-ETF yenza imali xa iiasethi ezingaphantsi zisenyuka ngexabiso. Ukuba umboneleli we-ETF ulandelela amasheya emveli okanye ii-indexes, uya kwenza nemali ngezahlulo.
Zeziphi iindlela zokuhlawula ezixhaswa ngabarhwebi be-ETF?
Kuya kufuneka ukwazi ukufaka imali ngedebhithi / ngekhadi letyala okanye ngokudlulisa ibhanki. Ukuba ukhetha ii-ETFs ngokusebenzisa umthengisi weCFD, unokukhetha ukusebenzisa i-e-wallet, nayo.